“Xildhibaanada baarlamaanka ee keenay mowshinka, talaabada ay qaadeen waa sharci daro” Muudey, ku xigeenka baarlamaanka. – Radio Daljir
Muqdisho,Dec,14 -Gudoomiye kuxigeenka koowaad ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa kasoo horjeestay talaabadii xildhibaano katirsan baarlamaanka Soomaaliya ay ku sheegeen inay xilkii kaga qaadeen gudoomiyaha baarlamaanka Soomaliya Shariif Xasan Sheekh Aadan.
Gudoomiye kuxigeenka koowaad ee baarlamaanka Cabdiwali Sheekh Muudey oo shir jara’id ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa sheegay xildhibaanadu inay qaadeen talaabo sharci daro ah, islamarkaana loo baahanyahay qaab sharci ah inay xilka uga qaadaan gudoomiyaha baarlamaanka hadii ay doonayaan xilka qaadis inay ku sameeyaan.
“Xildhibaanada qaar ka mid ah waxa ay ku dhaqaaqeen waa arin aan waafaqsanayn sharciga iyo xeer hoosaadka baarlamaanka,waxaana ay tani ay horseedaysaa fowdo iyo nidaam daro mudo labaatan sano meeshan na dhigtay”ayuu yiri gudoomiye kuxigeenka baarlamaanka Soomaaliya Cabdiwali Sheekh Muudey,isagoona ku sifeeyay xilka kaaqadista xildhibaanadu ay sameeyeen inay tahay caro,caadifad iyo laablakac lagu doonayo in lagu qalqal galiyo dadaalka ay dowladda ugu jirto inay ku sugto amaanka dalka.
Hadalka gudoomiye kuxigeenka baarlamaanka Soomaaliya ayaa kusoo beegmaya xilli 283-munade oo katirsan baarlamaanka Soomaliya ay sheegeen inay xilkii ka qaadeen gudoomiyaha baarlamanka Shariif Xasan Sheekh Aadan oo lagu eedeeyey inuu jabiyay sharcigii u dagsanaa golaha baarlamaanka ee Soomaaliya.